Si fudud Bedelka video ka Computer si ay iPad-
> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Video ka Computer si ay iPad
Ma doonaysaa in lagu wareejiyo videos kombiyuutar si ay iPad aan tirtiro ah videos kale ee iPad, laakiin aadan aqoon sida? Haddii aad raadinaya xal aan natiijo kasta oo da ', hadda, kaliya aad u joojiso ka careysan. Halkan, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa in aad Wondershare TunesGo ama Wonershare TunesGo (Mac) . Waxay kuu ogolaanaysaa inaad videos ka computer wareejiyo iPas oo aan laga badinin wax video asalka ah ee iPad. Iyo wixii intaa, haddii video aad u gudbaayo iPad ma aha iPad qaab saaxiibtinimo, waxaa loogu badalo doonaa video ay u iPad ay taageerayaan qaab aad u. Waa awood leh oo si sahlan loo isticmaalo. Just in 2 talaabooyinka, aad si guul leh nuqul doonaa videos kombiyuutar si ay iPad.
Isku day TunesGo Wondershare inay sii qulquli videos kombiyuutar si ay iPad! Haddii aad computer Mac ah leedahay, fadlan isku day Wondershare TunesGo (Mac).
2 tallaabooyin ay nuqul video ka computer si iPad
Step1: Burcad barnaamijkan iyo xiriiriyaan iPad la
Download iyo rakibi TunesGo Wondershare on your computer. Waxaa si buuxda la jaan qaada orodka computer on Windows 8, Windows 7, Windows XP iyo Windows Vista. Badidoodu waxay abuurtaan TunesGo iyo xiriiriyaan iPad la computer via cable USB ah. Barnaamijkan ogaan doonaa iPad si degdeg ah ka dib markii uu ku xiran.
Fiiro gaar ah: Waxaad hubisaa in aad ku rakibtay Lugood on your computer. TunesGo oo keliya ka shaqeeya halka Lugood la geliyo.
Step2: kombiyuutar dhaqaaq video in iPad
Ka dib markii in, geedka buugga bidix, riix batoonka "Media" inay soo qaadaan suuqa kala warbaahinta. Sida iska cad, waxaa jira line sarre uu furmo suuqa warbaahinta. Guji "Movies" sare ee daaqadda. Markaas, furmo maamulka filimada ka, riix batoonka "Add" in ay dajiyaan videos ka your computer si iPad.
Fiiro gaar ah: TunesGo si buuxda u la jaan qaada dhamaan noocyada iPad socda macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5, oo ay ku jiraan iPad mini, iPad Air, iPad bandhigay isha iyo iPad 2.
In kaliya ilbiriqsi, waxaad arki doonaa in aad doonayso videos ayaa iPad. Tani waa sida loo video ka computer wareejiyo iPad. Waa mid aad u fudud, sax? Ka sokow, la TunesGo Wondershare, waxaad ka iPad in PC wareejin karaan videos sidoo. Ku raaxeyso aad iPad!
Isku day TunesGo Wondershare in aad nuqulka videos kombiyuutar si ay iPad hadda!